Ngingakwazi yini ukushiya ikuphawula uma umbungazi ekhansele indawo engiyibhukhile? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Okwezivakashi – isihloko sosizo
Ngingakwazi yini ukushiya ikuphawula uma umbungazi ekhansele indawo engiyibhukhile? – isihloko sosizo
Ungahlela ukuphawula okubhalile kuze kushicilelwe ukuphawula kwakho.
Ungaphosta impendulo kuwonk'uwonke ekuphawuleni abanye abakubhalela kona, kodwa awukwazi ukuyikhipha. Ukuphawula kukhishwa kuphela uma kweph…